basic of SQL Statement (part 6) | our notes for our youngers
basic of SQL Statement (part 6)
Filed under: SQL Commands — Tags: cross join, DataBase, inner join, left join, outer join, right join, select — sevenlamp @ 10:00 AM
Sql statement တွေဘက်ကိုတော့ မလှည့်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ရေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီး အချိန်ကမရှိဘူးဖြစ်နေတာနဲ့ ရှေ့မဆက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရတဲ့အချိန်လေးလုပြီး ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ထပ်ရေးနေဦးမှာမို့ အားပေးကြပါဦးဗျာ။ ကဲ… ကျွန်တော်တို့ select statement ကို ပြောလက်စ ဆက်ပါဦးမယ်။ table တစ်ခုထဲက data ကို ထုတ်ကြည့်တာကိုတော့ နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ table တွေထဲက data တွေကို ထုတ်ကြည့်ရအောင်။ ဥပမာဗျာ… item table ထဲက record အားလုံးပြမယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် categoryid အစား categoryname ကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်၊ item table နဲ့ category table ၂ ခုကို ချိတ်ရတော့မှာပါ။ ဟုတ်ပြီ… ဒါဆိုရင် table တွေ ချိတ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုလဲ… ?
ဟုတ်ကဲ့ table တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုချိတ်ဆက်တာကို join လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ join နည်း ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
၁) cross join
Cross join ကတော့ table ၂ ခုကို comer(,) ခံပြီး join တာပါ။ ဒီလိုမျိုးပါ
select item.*, category.categoryName
from item, category
ItemID ItemName CategoryID Price Balance Remark CategoryName
1 Sony Optical Mouse 1 2500 10 – Computer
2 A4 Tech Keyboard 1 5000 1 – Computer
3 ViewSonic 17” Flat CRT 1 150005– Computer
4 First Eleven Book2500 15 – Computer
5 SONY 32” TV3900000 1 – Computer
6 Moon 16” Stand Fan3200003– Computer
1 Sony Optical Mouse 1 2500 10 – Stationary
2 A4 Tech Keyboard 1 5000 1 – Stationary
3 ViewSonic 17” Flat CRT 1 150005– Stationary
4 First Eleven Book2500 15 – Stationary
5 SONY 32” TV3900000 1 – Stationary
6 Moon 16” Stand Fan3200003– Stationary
1 Sony Optical Mouse 1 2500 10 – Electronic
2 A4 Tech Keyboard 1 5000 1 – Electronic
3 ViewSonic 17” Flat CRT 1 150005– Electronic
4 First Eleven Book2500 15 – Electronic
5 SONY 32” TV3900000 1 – Electronic
6 Moon 16” Stand Fan3200003– Electronic
1 Sony Optical Mouse 1 2500 10 – Clothes
2 A4 Tech Keyboard 1 5000 1 – Clothes
3 ViewSonic 17” Flat CRT 1 150005– Clothes
4 First Eleven Book2500 15 – Clothes
5 SONY 32” TV3900000 1 – Clothes
6 Moon 16” Stand Fan3200003– Clothes
1 Sony Optical Mouse 1 2500 10 – Kitchen wares
2 A4 Tech Keyboard 1 5000 1 – Kitchen wares
3 ViewSonic 17” Flat CRT 1 150005– Kitchen wares
4 First Eleven Book2500 15 – Kitchen wares
5 SONY 32” TV3900000 1 – Kitchen wares
6 Moon 16” Stand Fan3200003– Kitchen wares
cross join လို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဒီပုံစံက table ၂ ခုကို မြှောက်လို့ရတဲ့ အတိုင်း result ထွက်ပါတယ်။ item ထဲမှာက record ၆ ကြောင်း၊ category ထဲမှာက record ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်က query ကို run လိုက်ရင် record စုစုပေါင်း အကြောင်း ၃၀ ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ item table ထဲက record ၁ကြောင်းစီ အတွက် category table ထဲမှာ record ရှိသလောက်ကို ထုတ်ပြသွားတာပါ။ ကျွန်တော်က့အကုန်မထုတ်ပဲ item table ထဲမှာ ပါတဲ့ categoryID နဲ့ category table ထဲမှာပါတဲ့ categoryID တူတဲ့ record တွေပဲ ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထွက်လာတဲ့ result ကို condition ပြန်စစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ where ကို သုံးပြီး အခုလို ရေးရပါမယ်။
from item, category where item.categoryID = category.categoryID
၂) inner join
Inner join က cross join ကို where ထည့်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ တူပါတယ်။ table ၂ ခုကို join ဖို့အတွက် On keyword ကိုသုံးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါ..
from item inner join category
on item.categoryID = category.categoryID
inner join နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက် item table ထဲက categoryID က category table ထဲမှာ ရှိမနေဘူးဆိုရင် အဲဒီ record ကို ထုတ်ပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပြီ တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်က item table ထဲက အားလုံးထုတ်ပြချင်တယ်၊ category table ထဲမှာ ရှိရင် category name ပြပြီး၊ မရှိရင်တော့ null ပဲပေါ်လာချင်တယ်ဆိုရင်။ တနည်းအားဖြင့် table တခုခုကို မူတည်ပြီး ပြချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ inner join ကိုသုံးလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီအခါမှာ outer join ကိုသုံးရတော့မှာပါ။
၃) outer join
Outer join ကို ၂ ပိုင်းထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ Left outer join နဲ့ Right outer join ပါ။ join keyword ရဲ့ ဘယ်ဖက်က table ကို အကုန်ပြမယ်ဆိုရင် left join နဲ့ ရေးရပြီး။ join keyword ရဲ့ ညာဖက်က table ကို အကုန်ပြချင်ရင်တော့ right join နဲ့ ရေးပါမယ်။
from item left join category
from item right join category
NULL NULL NULL NULL NULL NULL Clothes
NULL NULL NULL NULL NULL NULL Kitchen wares
left join လို့ရေးရေး left outer join လို့ပဲ ရေးရေး တူတူပါပဲ။ right join နဲ့ right outer join လည်း တူတယ်နော်။ နောက်ဆုံး query result မှာ null တွေထွက်လာတာ တွေ့ရတယ်နော်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ category table ကို မူတည်ပြီး ယူလိုက်တော့ item table ထဲမှာ မရှိတာတွေအတွက် null တွေထွက်လာတာပါ။
visit regularly and carry on.
Cheers and congratulation!
Comment by pronek — September 18, 2009 @ 2:19 PM
Comment by sevenlamp — September 18, 2009 @ 4:08 PM